श्रीमानको ठूलो लिङ्ग भएकै कारण यी महिलाले गरिन् सम्बन्धविच्छेद ! कत्रो थियो त लिङ्ग ? - KlipMandu
Entertainment Fashion FEATURED Female General Latest News
एउटा अनौठो कारणबाट सम्बन्ध विच्छेदको घटना सार्वजनिक भएको छ । मीडिया रिपोर्टका अनुसार एक महिलाले अदालतमा दायर गरेको सम्बन्धविच्छेद मुद्दामा जो कारण बताएकी छिन्, त्यो सुनेर तपाई पनि अच्चममा पर्नुहुनेछ ।
महिलाका अनुसार उनका पतिको लिंग चाहिने भन्दा लामो छ । अदालतले महिलाको यो मुद्दा स्वीकार गर्दै सम्बन्धविच्छेद प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छ ।
घटना नाइजेरियाको जम्फारा राज्यको हो, जहाको शरीया अदालतले तीन बच्चाकी आमा आयशा दन्नुपावालाई आफ्ना पति अली मैजिनरीसँग सम्बन्धविच्देछका लागि अनुमती दिएको छ ।
महिलाले अदालतलाई बताएकी छिन् कि पहिलो विवाहमा खटपट भएपछि उनले मैजिनरीसँग दोस्रो विहे गरेका थिए । स्थानीय परम्परा अनुसार पत्नीले पतिको घर जानुभन्दा पहिला बेहुलालाई दुलहीका आमाबुवाले घरमा बोलाएका थिए ।
परम्परागत विवाहपछि दुबैबीच दुलहीको घरमा शारीरिक सम्बन्ध बसेको थियो । तर, त्यहाँ आयशाका लागि धेरै दुःखदायी क्षण बन्यो ।
उनले अदालतमा भनेकी छिन्, ‘उहाँ हाम्रो घरमा आउनुभएको थियो र हामी दुईको पहिलोपटकको मिलनमा ओछ्यान नै तात्यो, तर त्यो अनुभव कुनै खतरनाक सपनाभन्दा कम थिएन् ।’
महिलाले भनेकी छिन् कि सेक्समा मनोरञ्जन पाउँनुको सट्टा त्यो अनुभव एकदमै पीडादायी भयो, किनकि पतिको लिङ्ग धेरै ठूलो थियो ।यद्यपी, पहिलो यती कडा खालको सेक्स अनुभवपछि आयशाले औषधी नै खानुपर्‍यो ।
आयशाले आफ्नी आमालाई आफ्नो यो कडा सेक्स अनुभव बारेमा बताएकी थिईन्, तब आमाले उनलाई विस्तारै विस्तारै कडा सेक्स गर्न रमाइलो लाग्ने छ भनिन् । आयशाले मीडियालाई बताए अनुसार त्यसपछि उनकी आमाले नै उनलाई औषधी खान सल्लाह दिएकी थिईन् ।
जम्फारा नाइजेरियाको राजधानी लागोसबाट करिब ६०० माइल दूरीको उत्तर-पश्चिममा पर्छ । यो नाइजेरियाको पहिलो राज्य हो जहाँ सम्बन्धविच्छेदको कानूनलाई मान्यता दिइएको छ ।
वयश्क अवस्थामा पुरुषको लिङ्गको लम्बाई चरम अवस्थामा ५.२ इञ्च अर्थात करिब १३.१२ सेन्टीमिटर हुन्छ जबकि सामान्य अवस्थामा यसको लम्बाई ४.६ इञ्च अर्थात ९.१६ सेन्टीमिटर हुन्छ । जबकि मैजिनरीको लिङ्गको लम्बाई ६.५ इञ्च थियो
← दलित महिला वडा सदस्य वडा अध्यक्षसँग आपत्तिजनक अवस्थामा फेला परेपछि
मेरो प्रतिस्पर्धा मसँग मात्रै हो →
गम्बीर संकटमा धुर्मुस सुन्तली